သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်-၄ [မင်းကြီးအသောက နှင့် ယောနက-အာဖဂန် နှင့် အစ္စလာမ်- အာဖဂန်မင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ] | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Today’s Global Reality
Myanmar President’s Official web site attaching malicious virus? »
Tags: Alexander Berzin, Harvard University, Islam, Mongol Empire, Nava Vihara, Northwestern India, Spread of Islam, Turkic Peoples
This entry was posted on November 17, 2012 at 5:46 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်-၄ [မင်းကြီးအသောက နှင့် ယောနက-အာဖဂန် နှင့် အစ္စလာမ်- အာဖဂန်မင်းနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ]”
December 13, 2012 at 6:10 am | Reply
အိန္ဒိယ နှင့် ထေရဝါဒ
ကုသိနာရုံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်တွေကို မွတ်စ်လင်မ်တွေက ဂူပေါက် ပိတ်မီးပူဇော်ခဲ့တယ်လို့ ဘယ်ကမ္ဘာကျော် သမိုင်းကျမ်းမှာ ပါရှိသလဲ ဆိုတာကိုတော့ မသိပါ။ တစ်ကယ်လို့ အဲဒီလိုဖြစ်ရိုး မှန်ခဲ့ရင်လည်း အဲဒီရဟန်းတွေ ဟာထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကုသိနာရုံ (Kushinagar) ဟာ အိန္ဒိယရဲ့ မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ဥတ္တရပရာဒေ့ရ်ှမှာတည်ရှိပါတယ်။ အိန္ဒိယပြည် မြောက်ပိုင်းနဲ့ နောက် မြောက်ပိုင်းတွေမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟာ (သာသနာနှစ် ၆၀၀၊ အေဒီ ၁၀၀ခန့်) က တည်းကိုက ကွယ်ပခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓမ္မဝါဒီ ဂိုဏ်းကွဲတွေဖြစ် ကြတဲ့မဟာသံဃိကဂိုဏ်း နဲ့သဗ္ဗတ္ထိဂိုဏ်းဝါဒ တွေသာလွှမ်းမိုးခဲ့ကြောင်း မောင်အံ့ မဟာ ဝိဇ္ဇာ (ဘုံဘေ) က သူ့ရဲ့ ဗုဒ္ဓ သာသနာတော် ၂၅၀၀ ခရီး စာမျက်နှာ ၈၂၊ ၈၃ မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြု အသောကမင်းကြီးရဲ့ မောရိယမင်းဆက် နောက် ပိုင်းမှာသုင်္ဂမင်း (သုင်္ဂပုရှာမိတြ)ဟာမဂဓအင်ပါယာကို စိုးစံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမင်းဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းကွဲတိုင်း ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ဗြာဟ္မဏ(ဟိန္ဒူဘာသာဝင်) မင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးခေါင်း တစ်လုံးဖြတ်ဆက်သလျှင် ဆုငွေ (၁၀၀၀) ပေးမည် လို့ ကြေညာပြီး နှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ပါ။ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ ထေရဝါဒ ရဟန်း တော်တွေဟာ ဗြာဟ္မဏဘာသာဝင် သုင်္ဂပုရှာမိတြ ရဲ့ သုင်္ဂမင်းဆက် လက်ထက် မှာတင် အိန္ဒိယ မှာ ကွယ်ပခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အေဒီ ၁ ရာစု အတွင်း မှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အိန္ဒိယမှာ လုံးဝမရှိတော့ဘဲ သီဟိုဠှ် နဲ့ သုဝဏ္ဏဘူမိ သထုံပြည် တို့မှာ သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း၊ ဟိန္ဒူဗြာဟ္မဏ ဘာသာဝင် ဘုရင်တွေ ဟာ ဗုဒ္ဓ ဂယာ က မဟာဗောဓိ ပင်ကို အကြိမ်ကြိမ် ခုတ်ထစ်တူးဖော် မီးရှို့ခဲ့ကြကြောင်း ဦးစိန် ထွန်း (မာမက-သုတေသီ) က သူ့ရဲ့ ကမ္ဘာပတ်၍ ဘုရားရှာခြင်းစာအုပ်၊စာမျက်နှာ (၂၄၂၊ ၂၄၃) မှာ အခိုင်အမာရေးပြထားပါတယ်။
အေဒီ ၃ ရာစု မှ ၄ ရာစုအတွင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ မဟာယနဂိုဏ်းဟာ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ထွန်းကားနေခဲ့ပြီး ပင်မထေရဝါဒဟာတော့ သီဟိုဠှ် နဲ့ မြန်မာပြည်ဘက်မှာ ထွန်းကားနေခဲ့ တယ်လို့ရေစကြိုအရှင်ဧသိက က သူ့ရဲ့ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစာအုပ် စာမျက်နှာ (၃၁) မှာ အခိုင်အမာ ရေးသားထား ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို သမိုင်း အထောက်အထားတွေနဲ့ သေသေချာချာ သိရတာက အာဖဂန် ဘုရင် စူလ်တန်မဟ်မူဒ် အိန္ဒိယ ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်၊ အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းတွေမှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ ကွယ်ပနေခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မဟာသံဃိက အစရှိတဲ့ အဓမ္မ ဝါဒီဂိုဏ်းကွဲတွေ နဲ့ မဟာ ယန အယူအဆတွေသာကြီးစိုးနေခဲ့တယ်ဆိုတာပါ။
မဟာယန အယူအဆ တွေကြီး စိုးနေတယ်လို့ ဆိုရာမှာလည်း အဓိက ကြီးစိုးနေခဲ့တာက မဟာယနအသွင်ကို ဆောင်ထားတဲ့ တန္တရ မန္တရ အယူဝါဒသာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ တန္တရ မန္တရအယူကို ဝဇီရယာနလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
တန္တရ မန္တရ အယူဝါဒ
ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်တဲ့ အတွက် တန္တရ မန္တရ အယူဝါဒ ဘာလဲ ဆိုတာ ကို အကျဉ်းတင်ပြလိုပါတယ်။ တန္တရ မန္တရ အယူဝါဒ ဆိုတာကို ပညာရှင်အချို့က ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွှယ် ရေးသား ကြပေမဲ့၊ တစ်ကယ်တော့အဲဒီအယူဝါဒ ကျင့်စဉ် ယုံကြည်ချက်တွေဟာ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမ တွေနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင် လျှက်ရှိပါတယ်။ တန္တရ မန္တရအယူဝါဒ ရဲ့ အဓိကကျင့်စဉ် တွေက မန္တန်၊ အင်းအိုင် ခါးလှဲ့လက်ဖွဲ့ အစီအရင် တွေ အပေါ်အခြေခံပြီး၊ အဲဒီလိုကျင့်စဉ် တွေကျင့်ခြင်း အားဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်လို့ အယူရှိကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ တန္တရ မန္တရ အယူဝါဒရှင်တွေဟာ အိန္ဒိယပြည် ဂုပ္ပတမင်းဆက် အစပိုင်း (အေဒီ ၃၂၀)မှ ဟဿဝဒ္ဓနမင်း လက်ထက် (အေဒီ ၆၀၆) အထိ ကာလအတွင်း မန္တရားကျမ်း အတော်များများကိုရေးသားပြုစုခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီကျမ်းတွေ ထဲမှာ မန္တရား၊ အင်း အိုင်၊ လက်ဖွဲ့အစီအရင်တွေ အကြောင်း၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ မေထုန်မှီဝဲခြင်း စသည့်အကြောင်း တွေကို ဖော်ပြထားတဲ့အပြင်၊ လုယက်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ ခိုးခြင်း၊သူတစ်ပါးမယား ကြာခိုခြင်း စတဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုပါ ထောက်ခံ အားပေးထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။
အဲဒီ တန္တရ မန္တရ အယူဝါဒရှင်တွေ ရဲ့ ဂိုဏ်း ဟာ ဝဇီရယာန ဂိုဏ်းလို့ကျော်ကြားပါတယ်။ သူတို့ ဟာမဟာယန ရဟန်း အသွင်ကို ဆောင်ထားပြီး အယုတ်ညံ့ဆုံး လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်တဲ့လူတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။သူတို့ရဲ့ အယူဝါဒဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျယ်ပြန့်လာပြီး အဲဒီခေတ်က ဘုရင်တွေတောင် စစ်ထွက် စစ်ချီတဲ့ အခါ တန္တရ မန္တရမန်းမှုတ်တတ်သူတွေကို ခေါ် ပြီး စစ်ချီလေ့ရှိပါတယ်။ တန္တရ မန္တရ အယူဆရာကြီးတွေဟာ ဘုရင့်သမီးထံက ကာမ အလှုခံတဲ့အထိ ခေတ်စားလာခဲ့ပါတယ်။
အေဒီ (၈၀၀) ခန့်မှာ အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ မဟာယန တွေဟာ တန္တရ မန္တရ အယူဝင် မဟာယနတွေသာ ဖြစ်တယ် လို့ ဦးစိန်ထွန်း (မာမက-သုတေသီ) က သူ့ရဲ့ကမ္ဘာပတ်၍ဘုရားရှာခြင်းစာအုပ်၊ စာမျက်နှာ(၂၆၈) မှာရေးသားထားပါတယ်။ ဒီ တန္တရ မန္တရ ဝဇီရယာန အယူဝါဒ ဟာ ဂေါတမဗုဒ္ဓကိုယ်တော်ရဲ့ တရားတော် အဆုံးအမတွေနဲ့ဖီလာဆန့်ကျင်နေရုံမက၊ ဂေါတမဗုဒ္ဓကိုယ်တော်ရဲ့ သာသနာကို အလွန်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖျက်ဆီးတဲ့ အယူဝါဒသာဖြစ်ပါတယ်။ တန္တရမန္တရဝဇီရယာန အယူဝါဒကို မြန်မာနိုင်ငံ ပုဂံသမိုင်း မှာ အရည်းကြီးဝါဒ လို့လူသိများပါတယ်။
ဆက်ရန်- သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည် [နာလန္ဒ နှင့် တက္ကသိုလ်ကြီးများ ထေရဝါဒလား?-နာလန္ဒ နှင့်တူရကီ]